“Wanted”, karohina fatratra: polisy mpanao asan-jiolahy mitam-piadiana | NewsMada
Par Taratra sur 15/09/2018
Randrianajaina Tanteliniaina no anarany. 35 taona. Tena polisy am-perinasa fa tsy misoloky. Namoahan’ny Sampandraharahan’ny polisy misahana ny heloka bevava filazana fikarohana (avis de recherche), izy io, noho ny hoe ”fanaovana halatra mitam-piadiana, fikambanan-jiolahy…”
Karohina fatratra, Randrianajaina Tanteliniana, mipetraka eny Analamihitsy, izay voarohirohy amin’ny fanafihana mitam-basy sy fikambanan-jiolahy. Tsy hita popoka izy io, ka izay mahita azy, na manana vaovao momba azy, afaka miantso avy hatrany ny ao amin’ny sampana ady heloka bevava sakelika fahadimy mandray an-tanana ny raharaha.
Raha ny vaovao voaray, fanafihana nitranga ny herinandro teo, nahatafiditra ity polisy ity. Voalaza fa polisy roa lahy izy ireo no tompon’antoka tamin’ny fanafihana, tsy mbola nivoaka kosa ny mombamomba ity faharoa. Tsy mba polisy tsotra ireo raha ny fantatra fa manana laharam-boninahitra ambony, ary miasa eto an-drenivohitra.
Araka ny loharanom-baovao, fanafihana mpivarotra volamena teny Ampasamadinika teny no nahatafiditra azy ireo. lasan’izy ireo mihitsy ny volamena amina kilao. Nampiasa fiara sy basy izy ireo nandritra ny fanafihana. Nanomboka teo, nanjavona, ary izao namoahana taratasy fikarohana izao. Miandry ny momba ilay polisy faharoa kosa ny rehetra. Ity aloha no fantatra sy naharihary, fa araka ny loharanom-baovao ihany, nisy ilay polisy niray tsikombakomba faharoa.
Ny mpitandro filaminana no jiolahy
Mazava ny resaka aloha hatreto fa ny mpitandro filaminana sasany ihany no manao asan-jiolahy, na miray tsikombakomba amin’ny jiolahy. Tsy izy rehetra kosa anefa, fa misy ireo mania. Ankoatra ireo miaramilan’ny Capsat telo lahy, mahatonga resabe ,toy izany koa ireo zandary telo lahy tany Ambatofinandrahana, izao indray, polisy.
Anatin’ny hoe fanadiovana ny anatin’ny mpitandro filaminana ny tompon’andraikitra, saingy mampametra-panontaniana ny fomba fampidirana ireo olona hanao ny asan’ny mpitandro filaminana eto amintsika? Tsy amin’ny mpitandro filaminana ihany no isehoan’ny olona tsy mendrika akory hanao ilay asa fa amin’ny sehatra maro. Vokatry ny kolikoly amin’ny fidirana amin’ireny fifaninam-panjakana sy ny fakana volabe amin’ny mpiadina, ka rehefa tafiditra, mamerim-bola izy ireo. Mahalala izany avokoa ireo tompon’andraikitra ambony rehetra eto amin’ny firenena, saingy toy ny mandeha ho azy ny raharaha. Izao ny vokany, ny mpitandro filaminana ihany no jiolahy.